काठमाण्डौंको कपनबाट हराएका चार बर्षिय बालक एकाएक कसरी पुगे भारत? – Sandesh Press
September 29, 2021 212
काठमाण्डौंको कपनबाट हराएका एक बालक एकाएक भारत पुगेको पाइएको छ । उनको उमेर चार बर्षको मात्र छ । उनलाई कसैले अ प ह र ण गरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । त्यस्ता ब्यक्तिले ती बालकलाई भारतको बिहारमा पुर्‍याएको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती बालक हराएको थाहा पाएपछि भारतीय प्रहरीसमेतको सहयोगमा खोजी गर्ने क्रममा बिहार पुर्‍याइएको पाइएको हो ।
भारत घर भइ कपनको टहरोमा बस्दै आएका विनोद शर्माका छोरा पियुस सोमबार दिउँसो साढे ४ बजे देखि हराएका थिए । पियुस सोमबार ठूलोबुवा मिठु शर्माको टहराबाट बाटै हराएको उनका परिवारले जानकारी दिएका थिए ।
उनीहरुसँगै अर्को टहरोमा बस्दै आएका शंकर दासले बालक लगेको देखिएको प्रहरी अनुमान छ। बालकलाई भारत पुर्‍याउने दासलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपाल ल्याइ अनुसन्धान गरिने भएको छ। घटनामा संलग्न भनिएका दास दुवैको घर भारत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बालकको भारत बिहार मधुवनी घर हो भने दासको बिहार वैशाली हो। प्रतीकात्मक तस्वीरकाठमाण्डौंको कपनबाट हराएका एक बालक एकाएक भारत पुगेको पाइएको छ । उनको उमेर चार बर्षको मात्र छ । उनलाई कसैले अ प ह र ण गरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । त्यस्ता ब्यक्तिले ती बालकलाई भारतको बिहारमा पुर्‍याएको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती बालक हराएको थाहा पाएपछि भारतीय प्रहरीसमेतको सहयोगमा खोजी गर्ने क्रममा बिहार पुर्‍याइएको पाइएको हो ।
उनीहरुसँगै अर्को टहरोमा बस्दै आएका शंकर दासले बालक लगेको देखिएको प्रहरी अनुमान छ। बालकलाई भारत पुर्‍याउने दासलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपाल ल्याइ अनुसन्धान गरिने भएको छ। घटनामा संलग्न भनिएका दास दुवैको घर भारत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बालकको भारत बिहार मधुवनी घर हो भने दासको बिहार वैशाली हो। प्रतीकात्मक तस्वीर
Prevको हुन् पारस शाहको बाइककमा बसेर मध्यराति ठमेल घुम्ने सुन्दरी युवती (भिडियो सहित)
Nextसुटुक्क इन्गेजमेन्ट गरेकी चर्चित गायिका ईन्दिरा जोशी क्लबमा यसरी भेटिइन्
घर आउने तयारीमा रहेका कैलालीका महेश पोर्चुगल’मै अस्ताए !(हा’र्दि’क श्र’द्धा|ञ्जली )